Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Andro vaovao Spa andro ary mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Corinto
Avy any Londres ka hatrany Lisbonne, ny andro spaona mampihetsi-po ary mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Korintoia no antidote tonga lafatra amin'ny ririnina ary hahagaga amin'ny tanjona kendrena, fahasalamana ary fahasalamana.
Ny fanorana miala sasatra, ny fitsaboana mampatanjaka, ny dobo mandriaka, ny saosy, ny fatoriana ary ny tadio - ireo spaoro mahavariana ao amin'ny hotely manankarena ao Korinto eran'izao tontolo izao dia manolotra toerana mety hamelomana sy hamelombelona indray ny taona ho avy. Avy any Londres ka hatrany Lisbonne, ireo andro fitsangatsanganana mampihetsi-po ireo no antidote tonga lafatra amin'ny ririnina ary hiasa zava-mahatalanjona ho an'ireo tanjona salama, fahasalamana ary fahasalamana
Fiainana ESPA ao Korinto London
NEW: Andro Spa Fitness Retreat ao amin'ny fiainana ESPA ao amin'ny Hotel Corsius London
Mipetraka ao amin'ny habaka mahafinaritra, ESPA Life at Hotely London London dia malaza amin'ny fanatontosana azy amin'ny ankapobeny ny fahasalamana. Ny ekipa manam-pahaizana ankafiziny dia manolotra safidy tsy manam-paharoa fitsaboana spaoro, fitsaboana hafa mifameno, fitsaboana ara-batana ary hatsaran-tarehy. Ny porofo ara-tsiansa dia mampiseho fa ny fiasa ara-batana dia misy fiatraikany tsara eo amin'ny fahasalamana ara-tsaina ary ny fitsangatsanganana Day Spa Fitness Retreat any Korinto London dia natao hanambatra ireo singa spa sy fanatanjahan-tena ho an'ny vatana miasa sy saina salama.
Ny Day Spa Fitness Retreat dia misy ny fidirana amin'ny ESPA Life, ny fifampidinihana ary ny fametrahana tanjona, ny fotoam-pampiofanana manokana, ny Reformer Plates ary ny ny Stretching session, ny lamosina amin'ny lamosina sy ny soroka, ny fampiasana ny spaoro spaoro, ny gym ary ny fatoriana, ny proteinina aorian'ny fiasana. ahosotra / salama salama ary menaka fandroana fanatanjahan-tena hoentina mody. Mitombina mandritra ny taona 2019. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho corinthia.com/london na antsoy +44 (0) 20 7321 3000.
VAOVAO: Sambatra ny Taom-baovao ao amin'ny The Spa ao amin'ny hotely Lisboa Lisbonne
Ny Spa ao Hotel Corinto Lisboa no malalaka indrindra eto an-tanàna. Ny vatosoa ao amin'ny satroboninahiny dia ilay Circuit Acqua Therapy malaza sy mamelombelona izay misy faritra Jacuzzi mafana, sauna, efitrano fandroana, ranonorana sy loharano ranomandry. Ny Spa dia namolavola fikolokoloana spaoro Bliss Taom-baovao manavao sy manadio izay mampiditra ny Acqua Therapy Circuit hahazoana tombontsoa ara-pahasalamana faran'izay betsaka. Rehefa avy milentika ao anaty rano mifanohitra amin'ireo dobo rano mangatsiaka sy mafana ianao dia mankafiza fanorana amin'ny vatana feno fangaro manapoizina toy ny grapefue, berry juniper ary voasarimakirana. Manaraka izany ny fanadiovana tarehy sy ny fanodinana tarehy. Ny hoditra, vatana, saina ary fanahy dia ho vaovao sy hamelombelona miaraka amin'ny famirapiratana miavaka.
Ny fahasambarana amin'ny Taom-baovao dia misy trano fonenana mandritra ny alina, sakafo maraina, fitsaboana spa Bliss amin'ny taona vaovao, fidirana amin'ny trano spa ary ny fizahana tara. Manan-kery hatramin'ny 31 Janoary 2019. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho corinthia.com/lisbon na miantso + 351 21 7236363.
Vaovao: Taom-baovao, fialan-tsasatra vaovao You Spa ao amin'ny Hotelia St George's Bay, Malta
Eo amoron'ny morontsirak'i St George's Bay any amin'ny nosy Malta any Mediterane Corinia Hotel St George's Bay manana fomba fijery tsy manam-paharoa sy tsy misy fiatoana. Apollo Spa ao amin'ny hotely dia toeram-pialofana milamina manome fitsaboana isan-karazany manomboka amin'ny fikosehana aina sy fonosana hatrany amin'ny Ayurvedic sy reflexology massage ary ny fitsaboana amin'ny tarehy. Ny trano dia misy sauna, dobo anaty trano ary Jacuzzi.
Ny fialan-tsasatra spa an-trano vaovao dia mikendry ny hanavao ny saina, ny vatana ary ny fanahy ary ao anatin'izany ny fitsaboana spa ELEMIS Exotic Body Glow 90 minitra (fametahana vatosoa sy hazondamosina feno vatana (ity fikosehana sira manadio lalina ity dia mamporisika ny famerenana indray ny sela ary miteraka malefaka, malefaka ary mahavelona. hoditra), Exotic Cream Moisturizing Face Mask ary otra mampitony amin'ny menaka frangipani). The Taom-baovao, New You spa fitsaharana dia misy trano fonenana mandritra ny alina, sakafo maraina, fitsaboana spa Exotic Body Glow, fidirana amin'ny trano spa ary ny fizahana tara. Mitombina mandritra ny taona 2019, fijanonana roa alina farafahakeliny. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho corinthia.com/en/hotels/malta-stgeorgesbay na miantso + 356 2137 4114.
Royal Spa ao amin'ny Corinto Budapest
NEW: Detox Taom-baovao ao amin'ny Royal Spa ao amin'ny trano fivorian'i Corpsia Hotel Budapest
Fantatra amin'ny rano manasitrana azy, ny tanànan'ny Budapest dia manana antso maharitra ho an'ireo mpikaroka spa sy fahasalamana. Ilay Royal Spa kanto ao Corinthia Hotel Budapest dia toerana mahafinaritra miaraka amin'ny tantara manankarena nanomboka tamin'ny 1886. Misy ny Art Deco miroborobo manerana, dobo filomanosana tsara, fandroana Niagara, fandroana ahidrano sy ahidrano ary ranonorana mivatravatra.
Vaovao ho an'ny 2019, ny spa dia namorona Detox Taona Vaovao hamerenana amin'ny laoniny sy hamelombelona ny vatana sy ny saina. Ny Uplifting Getaway dia ahitana trano fonenana mandritra ny alina, sakafo maraina serivisy ho an'ny efitrano fiomanana, kitapo famahanana isan'andro miaraka amina smoothie sy bara granola, fidirana amin'ireo toeram-pitsaboana spa, fitsaboana spa detox ho an'ny roa, dite hariva mahasalama ary fanavaozana azo antoka ho an'ny sokajy efitrano manaraka. Mitombina amin'ny fijanonana manomboka ny 15 Janoary ka hatramin'ny 28 Febroary 2019. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho corinthia.com/budapest na miantso + 36 1 479 4000.
Ny fahitana ny tanàna eny amin'ny lanitra, avy amin'ny spa, ao amin'ny trano fandraisam-bahiny Corinto Hotel Prague
Miaraka amin'ny fahitana malalaky an'i Prague avy amin'ny rihana faha-26, ny Apollo Spa ao Hotel Corinto Prague manolotra fihemorana any an-danitra amin'ny fialan-tsasatra, fahasalamana ary fahasalamana lavitra ny tanàna be olona etsy ambany. Ny vahiny dia afaka mankafy ny faritra fialan-tsasatra, saona, fandroana etona, solarium ary - ny pièce de resist - ny dobo anaty trano misy fomba fijery mahavariana.
Ny hotely Zavaboary Spa misy ny fonenana mandritra ny alina, ny sakafo maraina, ny spaoro safidy (sonia Apollo Massage, manicure, pedikyur na hydrating tarehy), fidirana amin'ny tobin'ny spa ary fizahana tara. Mitombina amin'ny fijanonana mandritra ny taona 2019. Raha mila fanazavana fanampiny dia tsidiho corinthia.com/prague na miantso + 420 261 191 111.
Ny fiatoana spa sy ny andro spaoro rehetra dia miankina amin'ny fisiana ary mety hisy daty fahatapahana. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ny trano fandraisam-bahiny ao Corinto, tsidiho azafady corinthia.com.
Hivory ao Dubai ireo mpitarika sidina manerantany